ERP system တစ်ခုကို ဘယ်လိုစတင်ရွေးချယ် အသုံးပြုမလဲ ❓❓ – it4a
မိမိတို့ စီးပှားရေးလုပငွနွးအတှကွ ERP system တဈခု စတငအွသုံးပှုလိုလှှငဖွှဈစေ ၊ လကရွှိ ERP system ကိုပှောငွးလဲအသုံးပှုလိုလှှငဖွှဈစေ system ၁ခုကို သခှော စဉွးစားရှေးခယှဖွို့ လိုအပလွာပါပှီ..
ကမျဘာ့အဆင့မွှီထိုးဖောကနွိုငသွော ကုမပြဏီတဈခုဖှဈလာစရနွေ ၊ နရောဒသအတေောမွှားမှားကို ဖှန့ကွကှနွရောယူနိုငသွော အဖှဲ့အစညွးတခု ဖှဈလာစရနွေ Cloud ကိုအခှခေံထားသည့ွ ERP စနဈတဈခု ပှုလုပနွိုငသွော Digital နညွးပညာကို သင့လွုပငွနွးတှငွ Strategy တဈခုအနဖှငေ့ွ ပှငဆွငထွားသင့ပွါသညွ..
ယခုလို ဒဈဂစှတွယွ နညွးပညာခတွမှော information မှားကို အခှိနနွှင့ွ တပှေးညီ သှကလွကမွှနဆွနစွှာ accurate ပှုလုပနွိုငရွနွ နညွးပညာအသဈတှကေို အကှိုးရှိစှာ အသုံးခနှိုငရွနွ Operation ကောငွးကောငွး လုပနွိုငသွော software ကိုသာ အသုံးပှုသင့ပွါတယွ
ထိုကဲ့သို့သော နညွးပညာမှားအတှကွ SAP ERP စနဈထဲမှ SAP S/4 Hana ကိုအသုံးပှုမယဆွိုလှှငွ သင့လွုပငွနွးအတှကွ အကောငွးဆုံး ဖှဈလာမှာပါ..
SAP S/4 Hana ရဲ့ Business Benefits မှားကတော့
✅ Empower to maximize new emerging technologies
အသဈဖှဈပေါပွှောငွးလဲလာသော နညွးပညာမှား ကို အပှည့အွဝ အသုံးခနှိုငစွခှငွေး
✅ Increased efficiency via automation
✅ Efficient collaboration
✅ IT cost savings
သတငွးအခကှအွလကမွှားအတှကွ ကုနကွစှရိတမွှား သကသွာစခှငွေး
📌 သင့လွုပငွနွးတှငွ ယခုလကရွှိ SAP software ကို installation ပှုလုပသွုံးစှဲနပေါသလား?
📌 ယခုလကရွှိ software တှငွ အသုံးပှုလိုသော features တှကေို heavily customized ပှုလုပနွရပေါသလား?
📌 Customization အတှကလွုပငွနွး ယှဉပွှိုငအွားသာမှုတှရယေူ လိုခငှပွါသလား ?
☑️ Greenfield installation နှင့ွ S/4Hana on any cloud provider မှားသညွ အကောငွးဆုံးကိုမှ ရှေးခယှလွိုသော customers မှားအတှကွ en-of-lifecycle SAP installation အတှကအွသင့တွောဆွုံး ဖှဈပါတယွ
☑️ Heavily customized installation မပှုလုပလွိုသော customers မှားအတှကွ SAP မှ SaaS model ( Software asaService) model သညလွညွး အသင့တွောဆွုံးရှေးခယှမွှု ဖှဈပါတယွ
☑️ Customized installation ပှုလုပလွိုသော companies မှားအတှကွ SAP S/4 Hana မှ PaaS ( Platform asaService) သညွ best option ဖှဈပါလိမ့မွညွ
💯💻 လူကှီးမငွးတို့အနဖှငေ့ွ အထကပွါ Solution နှင့ွ Services မှားကို စိတပွါဝငစွားပှီး အသေးစိတွ အခကှအွလကမွှားကိုဆှေးနှေးလိုပါက IT4a (Information Technology for All) company သို့ ယခုပငစွုံစမွးမေးမှနွးနိုငပွါသညွ..
လူကှီးမငွး၏လုပငွနွးဆီသို့ လာရောကပွီး အသေးစိတရွှငွးပှ သှားမှာ ဖှဈပါတယွ
🌏 https://it4a.io သို့လဲ ဝငရွောကလွေ့လာနိုငပွါသညွ
☎📲 (+95)1-230 5190 , ( +959) 430 806 38 , (+959) 211 068 0
🏢 Room #602, Building 14, MICT park , Yangon ,
« Which technologies can CFO use to manage Organization’s Finance? Customer Relationship Management ၁ခုမှာ အရေးကြီးဆုံးအချက် »
erp IT4A S/4Hana SAP